Daarektarri CIA fi Kiim Joon-Un Iccitiin Walgahuu Traamp Mirkaneessan
Prezidaantiin Yunaayitid Isteets, Doonaald Traamp, daarektarri CIA – Maayik Poompihoo magaalaa Piyoong-Yaang keessatti, hoogganaa Kooriyaa Kaabaa – Kiim Joong-Un waliin iccitiin walga’uu isaanii har’a mirkaneessanii jiran.
“Walga’ichi qajeeltoon geggeessame . Hariiroon gaariin uumamee jira” jechuun, fuula Twiterii isaanii irratti kan barreessan – Prezidaantiin Yunaayitid Isteets, “Korri geggeessamu maal maal akka of keessatti qabatu hojjetamaa jira. Niyukilara dhabamsiisuun addunyaadhaaf waan gaarii dha. Kooriyaa Kaabaaf illee akksuma” jedhan.
Kaleessas, Prezidaant Traamp, “Yunaayitid Isteetsii fi Kooriyaa Kaabaa walga’ii sadarkaa ol’aanaa geggeessan” jedhanii turan. Garuu, gad-fageenyaan hin ibsine.
Kan lafa bashannanaa prezidaant Traampitti isaan daawwatan - Muummichi-ministaraa Jaappaan – Shiinzoo Abes, kaleessa, tarkaanfii preizidaat Traamp faarsanii, “tarkaanfiin akkanaa gootummaa barbaada” jedhanii turan.